Erw Steel Pipe ထုတ်လုပ်သူများ - China Erw Steel Pipe Factory & Suppliers
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအတွက် mild steel black round pipe
သံမဏိပိုက်ပစ္စည်းသည် အလွိုင်းမဟုတ်သော ကာဗွန်နည်းသော သံမဏိဖြစ်သည်။ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းမှာ ERW အရှည်လိုက်ချုပ်ရိုးဖြင့် ဂဟေဆော်ခြင်းဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန်စံနှုန်းများသည် ASTM A500၊ ASTM A53၊ ASTM A795၊ BS1387၊ BS EN10255၊ EN 10219၊ BS 1139၊ BS 39 တို့ကို လိုက်နာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Win Road International တွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အသုံးများသော စတီးပိုက်အရွယ်အစားများရှိသည်။Tianjin China ရှိ သံမဏိစျေးကွက်တွင် အခြေခံ၍ ပိုက်သတ်မှတ်ချက်များ၊ မျက်နှာပြင်ကုသမှု၊ ပိုက်အဆုံးသတ်ကုသမှုနှင့် အခြားဖောက်သည်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။သွားလာရေးအဆင်ပြေပြီး Xingang ဆိပ်ကမ်းကိုပိတ်သောကြောင့် အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။
astm a500 gr.a နှုန်းအရ အနက်ရောင်ဆေးသုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပိုက်များ
အရည်ပေးပို့ခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ပေးပို့ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ သံမဏိတိုင်၊ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအတွက်။
ပိုက် End Finish
ရိုးရိုးစွန်း၊ ဘောင်ခတ်ထားသောအဆုံး၊ ချည်ထားသောအဆုံး၊ လှိမ့်ထားသော groove end၊ swedged end၊ ပိုက်အဆုံးတွင် ဖောက်ထားသော အပေါက်များ
2. အစုအဝေးတွင် ပလပ်စတစ်အဖုံးဖြင့် ပတ်ထားပြီး၊ အဆုံးတစ်ခုစီကို နိုင်လွန်ကြိုးများဖြင့် ပတ်ထားသည်။
API 5L X42 ERW သံမဏိပိုက် ပေးသွင်းသူများ
ပိုက်အမျိုးအစား- Electric Resistance Welding Pipe
လျှောက်လွှာ- ရေနံ/ဓာတ်ငွေ့/ရေ သွယ်တန်းခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း။
သတ်မှတ်ချက်- အပြင်အချင်း- 21.3mm-660mm
LENGTH: 5.8/6/11.8/12 မီတာ
စံနှုန်းနှင့် အဆင့်-API 5L Gr.A,Gr.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65 PSL1 နှင့် PSL2;ASTM A53၊ Gr.A၊ Gr.B
အဆုံး- စတုရန်းအစွန်းများ/ရိုးရိုးစွန်းများ (အဖြောင့်ဖြတ်ခြင်း၊ လွှဖြတ်ခြင်း၊ မီးရှူးဖြတ်ခြင်း)၊ အမဲလိုက် / ချည်ထားသော အဆုံးများ
မျက်နှာပြင်- အနက်ရောင်ပန်းချီ/ ဆီဆေး/ သံချေးတက်ဆီ/ သံချေးတက်ခြင်း
ထုပ်ပိုးခြင်း- ထုပ်ပိုးထားသော၊ ပလပ်စတစ်ထုပ်များ၊ ရေစိုခံစက္ကူ/အိတ်ဖြင့်ထုပ်ထားသည်။
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ကာဗွန်သံမဏိပိုက် ၁၄ လက်မ
ERW တွင် ကာဗွန်သံမဏိပိုက်
ASTM A53 /API 5L အဆင့် B
ASTM A252 pile ပိုက်
ASTM A500 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြွန်
EN 10219 S275၊ S355
ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သော ဓာတ်ငွေ့နှင့် အရည်ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုသည့် ERW သံမဏိပိုက်သည် အနိမ့်နှင့် မြင့်မားသော ဖိအားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ERW နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နယ်ပယ်၊ မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းစသည်ဖြင့် ERW သံမဏိပိုက်များကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။
လက်ကားအရည်အသွေးမြင့် black fire sprinkler system steel pipe
ပြီးမြောက်ခြင်း- Grooved၊ Plain End၊ Screwed and Socketed
ရေနံပစ္စည်း api 5l /a53 std sch40 အနက်ရောင်ဆေးသုတ် erw ဂဟေဆော်ထားသောစတီးပိုက်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: API 5L ASTM A53 erw ကာဗွန်သံမဏိပိုက် gr.b
ပိုက်အဆုံး- စတုရန်းစွန်းများ (အဖြောင့်ဖြတ်ခြင်း၊ လွှဖြတ်ခြင်းနှင့် မီးရှူးခုတ်ခြင်း)။ဂဟေဆော်ရန်အတွက် beveled သို့မဟုတ် beveled၊
မျက်နှာပြင်- ဆီလိမ်းခြင်း၊ ပူပူနွေးနွေး သွပ်ရည်လိမ်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အနက်ရောင်၊ ဗလာ၊ အရောင်တင်အလွှာ/ သံချေးတက်ဆီ၊ အကာအကွယ်အလွှာများ (Coal Tar Epoxy၊ Fusion Bond Epoxy၊ 3-layers PE)
ထုပ်ပိုးခြင်း- အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိ ပလပ်စတစ်ပလပ်များ၊2,000 ကီလိုဂရမ်ရှိ သံမဏိပြားများ၊ အတွဲတစ်ခုစီတွင် တံဆိပ်နှစ်ခု၊ ရေစိုခံစက္ကူ၊ PVC လက်စွပ်နှင့် လျှော်တေအဝတ်များ၊ သံမဏိကြိုးများ၊ ပလတ်စတစ်ထုပ်များဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။
စမ်းသပ်မှု- ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ (ဆွဲဆန့်နိုင်စွမ်းအား၊ အထွက်နှုန်း၊ ရှည်လျားခြင်း)၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ (ပြားချပ်ချပ်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ကွေးခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း၊ မာကျောမှုစမ်းသပ်ခြင်း၊ သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ခြင်း)၊ ပြင်ပအရွယ်အစား စစ်ဆေးခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်စမ်းသပ်ခြင်း၊ NDT စမ်းသပ်ခြင်း (ET TEST၊ RT TEST) UT TEST)
အိမ်ဖန်အိမ်အတွက် PRIME PRE ဂလက်ဗနီဇစ်အဝိုင်း သံမဏိပိုက်
3. အထူ: 0.5 ~ 2.5 မီလီမီတာ
4.Length: 6M;9M;12M(စံ);4 ~ 13M (စိတ်ကြိုက်)
5. ဇင့်အပေါ်ယံပိုင်း အလေးချိန်- 60g~80g/m2(Standard) 80~200g/m2 (စိတ်ကြိုက်)
7. သင့်ရည်ညွှန်းချက်အတွက် အတိုင်းအတာများ